"Captain Thunder" နှင့် "El Jabato" ဖန်တီးသူဗစ်တာမိုရာကွယ်လွန်သည် eReaders အားလုံး
ဗိုလ်ကြီးမိုးကြိုး y တောဝက် ၎င်းတို့သည်စပိန်ရုပ်ပြများ၏သမိုင်းတွင်လူသိအများဆုံးကာတွန်းနှစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံး၏မှားယွင်းသောလက်မှတ်ကိုဘွားမြင်လေ၏ မနေ့ကကံမကောင်းတာကအသက် ၈၅ နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ဗစ်တာမိုရာ သူ၏ဇာတိမြို့ဘာစီလိုနာတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ။
မိုရာ၏ဘဝသည်မလွယ်ကူခဲ့ပါ၊ သမ္မတနိုင်ငံကိုကြေငြာလိုက်သောစပိန်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းစစ်နှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ငါတို့နိုင်ငံသို့သူပြန်လာခဲ့သည်မှာသူ၏ဖခင်သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူသည်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘရူဂါရာတွင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသူ၏ထူးချွန်သောစွမ်းရည်ကြောင့်လူသိများသည့်စီးရီးများအတွက်လည်းစာရေးခဲ့သည် Dr. Fog o စစ်ဆေးရေးဒန်။
အချို့သောစီးရီးများတွင်သူ၏အောင်မြင်စွာပါ ၀ င်မှုကြောင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင်အရေးကြီးသောရာထူးများရရှိခဲ့သည်။ ထိုအရပ်မှ 1956 ခုနှစ်တွင်ထ ဗိုလ်ကြီးမိုးကြိုးပထမ ဦး ဆုံးရင်ဆိုင်ရချင်သော ခွေးကလေးနှင့်၎င်းသည်သမိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ပြတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အောင်မြင်မှုအနေဖြင့်သူသည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်သူ၏အသင်း ၀ င်မှုကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့သူနှင့်ထောင်ကျခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ကသူထောင်မှထွက်ခဲ့ပြီးသူသည်အောင်မြင်မှုများကိုဆက်လက်ရိတ်သိမ်းခဲ့သည် တောဝက်.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီနေ့ခေတ်မှာသူဟာ Vicor Mora လိုရုပ်ပြလောကမှာအကြီးအကျယ်သရုပ်ဆောင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့အမွေအနှစ်ကိုထာဝရရုပ်ပြများစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခံစားနိုင်ခဲ့တယ်။
စပိန်ရုပ်ပြများ၏ပါရမီရှင်များအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သူဗစ်တာ Mora အားငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » "Captain Thunder" နှင့် "El Jabato" ဖန်တီးသူဗစ်တာမိုရာကွယ်လွန်သည်